Fuula DuraaKiristiyaanummaa Bu’uuraaWaaqayyo Eenyu?Yesus Eenyu?Macaafa QulqulluuDhuga Ba’iinsotaQur’aanaMuhaammadIslaamummaa Seenaa ItiyoophiyaaDubartoota Islaamummaa KeessattiKitaabotaBarreeffamoota haarawaWaa’ee keenyaNuuf barreessaa (nuun wal’argaa)
MASGIIDA FI GAHEE INNI HAWAASA KEESSATTI QABUKun gabaasa jecha tokko qofa irratti hundaa’edha. Jechi kunis Masgiida (Maskiida) kan jedhu yemmuu ta’u dhaabbata yeroo hundaa oduu sab-qunnamtii gara garaatin dhageenyu kan bakka bu’uudha. Read on…
Kan akka gaafii “Yesus Kiristoos raajii qofa moo Waaqa foonin ml’ate?” jedhuu Macaafa Qulqulluu Qur’aana irraa aadda foo’e hin jiru. Kutaalen Qur’aanaa 88 barreeffama kana keessatti gabaabbinaan ibsaman Read on...
Gaarummaan Isin Keessa ni Jiraataa? Yaalin jireenya gaarii jirachuudhaaf taasifamu hojii dadhabsiisaa dhuma hin qabneedha. Baay’onni keenya hojiilee keenya isaan badaa ta’an too’achuuf ni dhamaana; akkasumas hojii garii ta’e h